(ဝင်းတင်၊ ဦး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်သည် သတင်းစာ ဆရာ ဘဝ ကိုသာ မြတ်နိုးပြီး ရာထူး ဂုဏ်ရှိန် များကို တတ်မက်ခဲ့သူ မဟုတ်ပါ။ ဟံသာဝတီ သတင်းစာမှာ အယ်ဒီတာချုပ် လုပ်ကိုင် နေစဉ်က ဦးဝင်းတင်ကို မဆလ အစိုးက ပြန်ကြားရေး ဌာနမှာ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်း ခဲ့ဖူး သော်လည်း၊ ဦးဝင်းတင်သည် ထို ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်မခံ ခဲ့ပေ။ ၁၉၆၈ ကနေ ၁၉၇၂ အထိ အထက် ဗမာနိုင်ငံ စာရေး ဆရာ အသင်း စာဆိုတော်နေ့ စာတမ်း ဖတ်ပွဲများတွင် လူထု ဦးလှ၊ လူထု ဒေါ်အမာ တို့နှင့် အတူ ပါဝင် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ မန္ဈလေးတွင် ဟံသာဝတီ သတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ် အဖြစ် တာဝန် ယူရင်းပင် ရန်ကုန်သို့ ဆင်းကာ သတင်းစာ သတင်းများ တွင်လည်း ပို့ချပေး ခဲ့သည်။ သတင်းစာ သမိုင်း ပြုစုရန် ကိုလည်း ဦးထင်ကြီး၊ လူထု ဦးလှ၊ ရွှေဥဒေါင်း တို့နှင့် အတူ အထူး အားထုတ် ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်က အာဏာ သိမ်းပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် စတင် ဖွဲ့စည်းသည့် အခါ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့သည်။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစု ၌လည်း ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်နှင့် အတူ နာယက အဖြစ် တာဝန် ယူခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးအောင်ကြီး နှုတ်ထွက် ခဲ့ပြီးနောက် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း ခဲ့သည့် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီတွင် အတွင်းရေးမှူး (၁) အဖြစ် တာဝန်ယူ ခဲ့သည်။
လွတ်ရက် စေ့ကာနီးတွင် ဆရာ ဦးဝင်းတင်အား နိုင်ငံရေးကို စွန့်၍ စစ်အုပ်စုနှင့် လက်တွဲရန် စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ ဗိုလ်မှူးချုပ် သန်းထွန်းက စည်းရုံးခဲ့သည်။ ဆရာက "စစ်လွှမ်းမိုးရေး ဒဿန" ကို သူ အသက်ရှင် နေသရွေ့ အမြစ်ပြတ်အောင် တိုက်မည်ဟု တုန့်ပြန်ခဲ့သဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အများပြည်သူ ဆူပူ အုံကြွအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် အားပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အင်းစိန် ထောင်ထဲမှာပင် ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ် ထပ်မံ ချမှတ် ခံရသည်။
ထိုကြောင့် ၁၉၉၅ တွင် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် တိုးကာ စစ်ခွေးတိုက်သို့ အပို့ခံရသည်။ အာဏာပိုင် များ၏ ရိုက်နှက် ညှဉ်းပန်းခြင်း ကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက် လာပြီး နောက်ပိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် အမျိုးသား ညီလာခံမှ နှုတ်ထွက် သင့်ကြောင်း အကြံ ပြုချက်ကို ထောင်တွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အင်အားစု များက လက်မှတ် ရေးထိုး၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ပေးပို့ ခဲ့သည်။ လောလောဆယ် အရေး အကြီးဆုံး အလုပ် ၂ ခုကို လုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်း ခဲ့သည်။ တခုမှာ ပါတီ ပြုပြင်ရေး (Party Reform) နှင့် ညီလာခံ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး (NC Reform) တို့ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး ပါသော ထောင်တွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ၊ ထောင်တွင်း ဖိနှိပ် ညှဉ်းပန်းမှုများ၊ ရဲဘက် စခန်း များ၏ ငရဲခန်းများ၊ လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံ အခြေအနေတို့ ပါဝင်သော ၈၃ မျက်နှာပါ 'ထောင်တွင်း လူ့အခွင်းအရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ' ကို ကုလ သမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံ လိပ်မူ၍ ကုလ သမဂ္ဂ အထူး ကိုယ်စားလှယ် ယိုဇိုယိုကိုတာ ထံသို့ လျှို့ဝှက် စာရေးသား ပေးပို့ ခဲ့မှုကြောင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပုဒ်မ ၅ (ည) ဖြင့် ထပ်တိုး ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် ချမှတ် ခံရ ပြန်သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ အင်းစိန်ထောင် စစ်ခွေးတိုက် အတွင်း ချုပ်နှောင် ခံနေရစဉ် ဘဝတူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များကို ဦးဝင်းတင်က သူ့ ခံယူချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး "မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေး လုပ်တော့မယ် ဆိုကတည်းက စစ်အာဏာရှင် တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ် ဆိုတာ ကျနော်တို့ ကြိုတင် တွက်ဆ ထားရမယ်။ အာဏာရှင်ကို ပလ္လပေါ်က ဆွဲချတဲ့ အခါ အဆင် မသင့်ရင် အသက်တောင် ပေးချင် ပေးရလိမ့်မယ် ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ မြင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခေတ်မှာ ကျနော်တို့ တာဝန် မကျေရင် နောက်လာမယ့် မျိုးဆက် တွေက ကျနော်တို့ကို အပြစ် တင်စရာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံး နောက်တက် လာမယ့် လူငယ် မျိုးဆက်ကို လွတ်လပ်ရေးနဲ့ တရား မျှတမှု အတွက် ဘယ်လမ်းကို လျှောက်ရမယ် ဆိုတာ လောက်တော့ စံနမူနာ ပြနိုင်ရမယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် အလံ မလှဲစတမ်း စွန့်လွှတ် စွန့်စား ပြနိုင်မှ နောက် လူငယ် မျိုးဆက် ကလည်း ဒီအလံကို ဆက်လက် စွဲကိုင် ချီတက် ကြမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ စစ်လွှမ်းမိုးရေး ဒဿနကို အမြစ်က လှန်နိုင်ဖို့ ဒီပွဲမှာ အလံ မလှဲစတမ်း ယုံကြည်ချက်ကို မြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင် ထားကြဖို့ လိုပါတယ်" ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
၂ဝဝ၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလက နအဖ ထောက်လှမ်းရေးမှ မှားယွင်း ဖမ်းဆီး ထားသော အကျဉ်းသား များကို ပြန်လည် လွှတ်ပေးစဉ်က ဦးဝင်းတင်လည်း ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာနိုးဖြင့် သူ့ကို လေးစား ချစ်ခင် သူများက မျှော်လင့် ခဲ့သည်။ ဒီအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာပေ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လူထုက လေးစား ချစ်ခင်သည့် သတင်းစာ ဆရာမကြီး လည်းဖြစ်၊ စာရေး ဆရာမကြီး လည်းဖြစ်တဲ့ လူထု ဒေါ်အမာ ပြောပြ ခဲ့သည်မှာ၊ "အမေ ကလေ ကိုဝင်းတင်လဲ လွတ်လာတယ် ကြားတော့ ဝမ်းသာပြီး မျှော်နေတာပေါ့။ နောက်တော့ မပါဘူး ဆိုတော့လဲ အရင် ကတည်းက တွက်ထား ပြီးသားပဲလို့ အောက်မေ့ပြီး နေလိုက် တာပါပဲ။ နောက်တာ့ ဒုဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်က လွှတ်ပေးမယ့် လူတွေရဲ့ စာရင်း ထဲမှာ ဦးဝင်းတင် ပါတယ်လို့ ပြောတော့လဲ ပြန်ပြီး မျှော်နေ မိတာ ပေါ့ကွယ်။ ဟုတ်တယ် မို့လား။ ဒုဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်က ပြောနေတာကိုး။ နောက်ဆုံး ကျတော့လည်း လွတ် မလာဘူး။ အမေ့ စိတ်ထဲ ၂ ရက်လောက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ စားလိုလဲ မကောင်း အိပ်လိုလဲ မကောင်းနဲ့ အတော် နေမကောင်း ဖြစ်သွား ရတယ်။"
↑ (အမရပူရ), မောင်ကိုကို; သရုပ်ဖော်ဝလုံး. ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် (ကျားရဲ). ၁၆ အေ၊ လှည်းတန်း ၂ လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့: လွင်ဦးစာပေ (လှည်းတန်း), ၉၊ ၁၅၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၃.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝင်းတင်၊_ဦး_(ဟံသာဝတီ)&oldid=396763" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၁၈:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။